Banyere Anyị - Shijiazhuang Yiling Hospital
Ihe bụ ihe ọzọ, Yiling nwere a ike nnyocha otu, nke na-emi esịnede 29 academicians na China, ndị ọzọ nọ n'ọkwá dị elu tinyere ọkachamara laghachi, ndị mba ọzọ ndị ọkachamara na-, ndị dọkịta, nke nna ukwu na ụdị nile nke ọkachamara anya.
Yiling ọgwụ ụlọ ọrụ , Chinese na-emepụta ọgwụ ndị e depụtara ụlọ ọrụ 50 (Stock Usoro: 002603), nwere oge a na ngwaahịa akara maka Capsule, adụ Capsule, mbadamba, granule, mmiri mmiri ọgwụ etc, emewo nnyocha a dị oké njọ nke na ngwaahịa, gụnyere: TCM, nlekọta ahụ ike na ngwaahịa, n'ebe ọdịda anyanwụ formulations na TCM Mpekere wdg
Ụfọdụ patent ọgwụ ọjọọ karịsịa maka akpụ (anticancer) -YangZhengXiaoJi (加链接) Capsule, nke nwere doro anya na ike mmetụta maka cancer ọrịa. Na October 2017, ndị Medical Research Center, guzosie ike site Yiling Group Company na Cardiff University na UK e tọrọ ntọala maka 4 afọ.
The center amalite miri nkwurịta okwu na imekọ ihe ọnụ na Chinese na nkà mmụta ọgwụ megide akpụ nnyocha, na-adakarị ngwa & ịdị ahịa ego. Ọ mepụtara miri usoro nnyocha na Chinese na nkà mmụta ọgwụ YangZhengXiaoJi Capsule, nke gosiri na ike n'ụzọ dị irè inhibit a dịgasị iche iche nke akpụ metastasis, inhibit ọhụrụ ọbara arịa na akpụ, n'okpuru nduzi nke nnochianya ọrịa Ozizi.
ShenLingLan, ụdị ọzọ nke anticancer ọgwụ, dị oké ọnụ ahịa mgwa nke omenala Chinese na nkà mmụta ọgwụ bụ kwesịrị ekwesị n'ihi na ọrịa na abụọ erughi nke splin na akụrụ, ọbara stasis na nsí ìgwè tupu mgbe Radiotherapy na-anara ọgwụ. Ọ pụrụ ime ka ike ọgwụgwụ, ike ọgwụgwụ, umengwụ, ahu arọ na na.
JinLiDa granule, maka ụdị 2 ọrịa shuga mellitus Qi na Yin erughi syndrome, mgbaàmà: nku-aṅụ, polyorexia, mmamịrị, ahụ ji nwayọọ nwayọọ na mkpa, ike ọgwụgwụ, sweating, Fanre, afọ ntachi wdg
Bazi tonifying akụrụ capsules, akụrụ tonifying na okpomọkụ Yang. Na ọdabara ka akụrụ Yang erughi mere site n'úkwù na ikpere mgbu, dizziness na tinnitus, Shenpi ike ọgwụgwụ, forgetfulness, mkporomaasi ka oyi.
Jujuboside Oil Capsule. Otu ụdị ahụ ike nri mere n'ime Capsule udi, Zizyphus jujube kernel mmanụ nwere ike na-ebelata oge na-ehi ụra latency, ma dịkwuo oge na ogo ngwa ngwa efegharị efegharị ụra, ya bụ na-emighị emi ụra na ụra miri emi. Ọ n'ezie na-arụ ọrụ. Ọtụtụ akwụkwọ a kọrọ.
Site ugbu a, Yiling ngwaahịa e exported ka South Korea, Vietnam, England, Canada, Netherlands, Singapore, Russia na na.
Yiling Hospital mgbe afọ 20 nke development site mmali na bụkwa mkpụrụ aghọwo a n'oge a, integrated Chinese na Western na nkà mmụta ọgwụ jikọtara ụlọ ọgwụ nke bụ kasị elu larịị-arụ ọrụ na TCM na China.
Ọgwụgwọ nke muscle atrophy ọhụrụ ọmụmụ nke igbochi na ịchịkwa nke Chinese mba omenala Chinese na nkà mmụta ọgwụ ochichi ọkachamara na-elekwasị anya - muscle atrophy mba omenala Chinese na nkà mmụta ọgwụ ochichi ọkachamara na-elekwasị anya, na muscle atrophy nọgidere na-akụziri isi, raara nye moto ụdị ọrịa akwara, myasthenia gravis, muscular dystrophy ọrịa na multiple sclerosis na ndị ọzọ na akwara ozi ọrịa.
Department of rheumatology maka Hebei Province isi ọpụrụiche nke omenala Chinese na nkà mmụta ọgwụ, na ojiji nke esịtidem na mpụga ọgwụgwọ, na-enweta mmetụta dị mma na ọgwụgwọ nke scleroderma, polymyositis, Sjogren syndrome, Behcet ọrịa, rheumatism, ọrịa ọrịa, ankylosing spondylitis ọrịa site na Nchikota nke zuru ụwa ọnụ na obodo.
Oncology ngalaba (加链接) agwakọta TCM na n'ebe ọdịda anyanwụ na nkà mmụta ọgwụ ọnụ, ọma-emeso puku cancer ọrịa n'ụwa nile. N'ihi na dị iche iche nkebi nke cancer ọrịa ịmụta dị iche iche na-emeso ụzọ, na-enyere ndị ọrịa mma dịghịzi usoro, mma WBC, melite bi àgwà na ogologo ndụ. Karịsịa mma na-emeso ara cancer, eriri cancer, prostate cancer, ọrịa cancer akpa ume, gastric cancer na ndị ọzọ na ọrịa cancer.
Diabetes Department, a isi otu n'ime State Administration nke Traditional Chinese Medicine, na-ewelite a echiche ọhụrụ banyere "ka ọ gwọọ ndị ọrịa shuga mellitus, site n'akụkụ nke splin ozizi" na formulates ọhụrụ usoro nke "na-edozi splin na aru ọmụmụ + smoothing akwara" na-emeso -arịa ọrịa shuga na vaskụla nsogbu n'okpuru nduzi nke akwara ozizi. The curative mmetụta dị ịrịba ama.
Yiling Health Center : Yiling Health Town na 'dredging nnochianya ike ichebe omenala' dị ka nduzi agwakọta ike ichebe omenala ahụmahụ, ahụ ike ichebe ngo ahụmahụ, ahụ ike management, agba ọgwụ ọjọọ, ahụ ike na-ehi ụra, ahụ ike ichebe na ezumike-emefu, ahụ ike shopping na azụmahịa ngosi na onye-nkwụsị ikpo okwu maka ahụ ike ichebe.
A ise kpakpando hotel, mbụ ahụ ike isiokwu hotel na China, nwere Chinese restaurant na Western ụlọ oriri na ọṅụṅụ, e nwere ike ahịa na ya. The isi ọrụ, ndị kasị pụrụ iche ihe banyere Yiling Health Center, na ọ na-arụ ọrụ TCM ọkachamara na dị iche iche ndị ọkachamara na-arụ ọrụ dị iche iche ọrịa.
Ebe i nwere ike na-enweta kasị ala ndụ na gburugburu ebe obibi, ihe ndị kasị eme na ahụmahụ ndị ọkachamara ga-elekọta ahụ ike gị.
Yiling Medical Examination Center , a oge a na ahụ ike ule, o nwere environmentally mara ike management center na elu ụlọ ọrụ nke mere na ị pụrụ inweta VIP ọgwụgwọ.
Njirimara nchoputa oru gụnyere: ịlele netwọk na ịchọpụta, ugo egwu ike okwa nke ahụ ịgụ isiokwu, akwara ọbara n'ozuzu arịa nchọpụta, a dobe ọbara nchọpụta, site n'usoro nchọpụta, ọrịa shuga ize ndụ screening, TCM oruru njirimara.
Yiling International Travel Agency, na-enye visa ọrụ, insurance conselltion, tiketi, hotel ntinye akwụkwọ ozi, mba njem ọrụ na ndị ọzọ na njem ọrụ ihe.
Maka ọrịa : i nwere ike na-abịa na-enweta ike ọgwụgwọ, ma TCM & Western Medicine, na ihe oriri, ulo, omume, psychotherapy, akụkụ nile na-emetụta ahụ ike e nwere ike iwere n'ime anyị ọgwụgwọ plan.
N'ihi na sub-ahụ ike ndị mmadụ : ị na-ahụ ike, dị nnọọ bụghị ahụ ike, i kwesịrị a ọma ọzọ, adabara nduzi banyere ike gị, bịa na-ebi Yiling Health Center, anyị ga-eji TCM na-elekọta gị.
N'ihi na ndị mmadụ na-mkpa mgbe ọgwụ nnyocha : abịa ma na-ahụ ike na njem, anyị ga-ahụ ike gị management ọkachamara ndụ gị niile. Anyị ga mkpu n'oge ịdọ aka ná ntị n'ihi na ike gị, na-emeso sub-ahụ ike tupu ya abịa n'ime ọrịa.
Ihe niile ị na mkpa ike a mara mma website